Ogaden News Agency (ONA) – Hawaarin Badan oo Ka Goostay Ciidanka Gumaysiga Iyagoo Hubaysan.
Hawaarin Badan oo Ka Goostay Ciidanka Gumaysiga Iyagoo Hubaysan.
Wararka ka imanaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya ineey si xowli ah kusocoto goosashadii iyo kala cararkii ciidanka Hawaarinta, warkan oo uu nasoo gaadhsiiyay wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenia ayaa u qoraa sidan.
Waxaa markay taariikhdu ahayd 19/11/2015 deegaanka Saliida oo Dagmada Fiif ee xarunta Gobolka Nogob katirsan ayaa ciidanka Hawaarinta ka Goostay 4 askari oo hubkoodii wata. Sidoo kale 16/11/2015 Sanxaskule oo Dagmada Fiiq katirsan waxaa kasoogstay 2 askari oo Hawaarin ah.
Isla taariikhdan 16/11/2015 Galaalshe oo Gobolka Nogob katirsan waxaa kagoostay 6 askari oo Hawaarin ah.
Dhinaca kale waxaa 21/11/2015 Birqod oo Jarar katirsan waxaa kagoostay 8 Hawaarin ah oo uu kujiro nin kamid ah horjoogayaasha Hawaarinta oo lagu magacaabo Shaambal Kalajeex. Waxayna ninkan iyo kooxdiisu gaadheen magaalada Baladwayne ee xarunta Gobolka Hiiraan ee wadanka Somalia.